Lamaanihii Anime ee ku habboon Kuzu No Honkai - Cradle View
Hanabi iyo Mugi ma yihiin lamaane ku habboon Anime?
Leave a Comment Lammaanaha Anime ee ku habboon Kuzu No Honkai
Waxaa jira lamaanayaal badan oo ku habboon gudaha Naadi, oo qaarkood runtii aad ayey uga soocan yihiin kuwa ugu badan. Runtii tusaale wanaagsan oo ah lamaane ku habboon Anime ayaa laga yaabaa Hanabi iyo Mugi ka Kuzu No Honkai. Riwaayadda Anime jaceylka Kaas oo soo baxay sida Taxanaha Scums Wish TV ee 2017 uu lahaa falcelin kala qaybsanaan ah oo ka yimid daawadayaasha Anime.
Waxaad qoraalkan ka dhegaysan kartaa Anchor hoos:
Ku sii wad akhrinta lamaanaha Anime ee ku habboon xagga hoose Waxaan ka wada hadlaynaa Mugi iyo Hanabi's xiriirka, jilayaasha, sababta ay u wada dhammaan waayeen aakhirka iyo qaar kale oo badan.
Waqtiga akhriska ee la qiyaasay: 8 daqiiqo
Xanabi iyo Mugi oo Sariir wada jira
Dhaleeceeyayaal badan ma jeclayn Anime-ka oo sheegaya in dhamaadka aanu ahayn kaliya mid la isku raacsan yahay laakiin aan lagu qanacsanayn. Dhanka kale, taageerayaal badan oo ka mid ah Kuzu No Honkai Manga iyo Naadi waxa uu sheegay in uu ahaa dhamaad aad u wanagsan waayo waxa ay carabka ku dhufatay murugada iyo xaqiiqada cayriinka ah ee jacaylka aan la soo koobi karin. Maqaalkan waxaan ku dul mari doonaa xiriirka ka dhexeeya Mugi iyo Hanabi, iyo sababta dad badan oo jecel Anime-ka ay u arkeen inay yihiin Lamaanihii Anime ee Ideal.
Dulmar - Lamaanayaasha Anime ee ku habboon Kuzu No Honkai
In kastoo ku jira Naadi ma wada dhamayn oo waxay si murugo leh u go’aansadeen inay joojiyaan xidhiidhkii jacayl ee ay bilaabeen, ilaa hadda waxay ka mid ahaayeen lamaanayaasha aadka loo jecel yahay ee taageerayaasha Naadi, sida qof walba u maleeyay in ay dhab ahaantii loo sameeyay midba midka kale. Dhab ahaantii, maahan nolosha dhabta ah oo kaliya halka ay dadku u maleynayaan inay ahaayeen lamaane wanaagsan. Gudaha Qaybaha danbe mid ka mid ah, laba saaxiibo ah oo Xanabi ah ayaa sidaas yidhi Hanabi iyo Mugi waxay ahaayeen lamaane qumman. Sababtu waxa weeye in dadka dugsiga jooga ay ku arkayeen dugsiga, wada arkayeen, dhunkashada, gacmaha is haysta iyo dhammaan noocyada kala duwan ee waxyaallaha kale.
Bilawga Kuzu No Honkai
Bilawga Naadi halkaas oo Mugi iyo Hanabi la kulan waxaan aragnaa in ay u muuqdaan in ay xiriir galmo. Tani waa sababta oo ah marka Hanabi Wuxuu eegayaa Mr Kanai, Mugi ogaysiis oo degdeg u kaxaystay. Falkan fudud in Mugi sameeyo waa qayb ka mid ah heshiiska ay ku sameeyeen qaybta koowaad.
Dhab ahaan, Hanabi dhab ahaantii waxa ay ula jeedaa dhamaadka dhacdada aniga/anaga "Rabitaanka xumaanta" - taas oo iska cad meesha magaca Naadi ka yimi. Sheekada dhabta ah ee Kuzu No Honkai Dhammaantood waxay udub dhexaad u yihiin heshiiskaas ay samaynayaan, markaa waa macno sababta kanu u yahay magaca Naadi.
Mugi iyo Xanabi oo isku gacan qaaday
Goorma Hanabi jidkuu arkaa Mugi eegayaa Akane Waxay si degdeg ah u ogaatay in isaga, sida qaar badan oo ka mid ah wiilasha kale ee dugsigooda uu yahay mid ka mid ah wiilasha taageerayaasheeda. Way u naxday isaga sababtoo ah waxay sidoo kale jacayl u qabtaa Mr Kanai. Farqiga u dhexeeya labada waa mid aad u yar.
Labaduba ma heli karaan midka ay jecel yihiin, labaduba waa isku da'da ugu dambeyntiina waa labadooduba arday kuwaas oo tijaabinaya jinsigooda. Waxay sidoo kale tan ku samaysaa jilaa kale oo lagu magacaabo Sanae Ebato oo aad hoos ku arki karto.
Hanabi iyo Ebato oo ka socda Kuzu No Honkai
Ka dib marka xirmadan ay bilaabato, waxay bilaabaan isku xigxig la soo diyaariyey oo la kulmo ah halkaas oo ay ku galaan fal galmo ah. Sidoo kale waa halka ay ka wada hadlaan qofka ay dhab ahaantii jecel yihiin. Waxay isu naxariistaan ​​muddadan midba midka kale. Midda kale ee ku saabsan xiriirkooda ayaa ah in ay ballan qaadayaan in aysan dhab ahaan u dhaawicin kan kale, dabcan, kan kale iska daayaan haddii ay awoodaan in ay la joogaan mid ay iyagu leeyihiin. jacayl dhab ah.
Dabeecada aan caadiga ahayn ee Xanaabi iyo xiriirka Mugi
Markaa waxaas oo dhami miyay run ahaantii sameeyaan Hanabi iyo Mugi lamaane Anime ku haboon? Mise waxay la mid yihiin lamaane kasta oo Anime caadi ah. Waxay ila tahay faraqa u dhexeeya ayaa ah in xiriirkoodu uu ku dhisan yahay been.
Waa been abuur Si kastaba ha ahaatee, aayar aayar muddo ka dib, waxay noqdeen kuwo isku sii dhegan, waxaanan filayaa in Xanabi ay garatay inay jeceshahay isaga marka hore. Gudaha Naadi waa sheeko murugo leh.
Mugi iyo Hanabi ku heshiiyaan inay qirtaan qofka ay jecel yihiin ka dibna kula kulmaan beerta fiidkii markay tahay 6pm (waxa laga yaabaa inay wakhti ka duwan tahay). Markii wakhtigu yimaado, Hanabi dabcan waxaa diiday Kanai laakiin Mugi mar kale ayuu u nuugay jiidashada Akane. Mugi uu galmo la sameeyay Akane oo iyadu qaar ka mid ah sida uu u rumaysto inay runtii jeceshahay isaga.
Nasiib daro Mugi, ma aha mid run ah oo wuxuu ku noqday jidkiisii ​​hore. Su’aashu waxay tahay: sameeyey Hanabi ma gaadhay go'aankan la mid ah sida aan qabo? Miyay taas u qaadatay uun Mugi ayaa tan ku sameeyay Akane? Mise wax kale ayay ka fikiraysay?
Haddii aad raadinayso xoogaa caddayn ah oo ku xeeran dhammaadka Kuzu No Honkai iyo Hana iyo Mugi's xiriirka markaa fadlan akhri maqaalkeena taariikhda la sii daayo Scums Rabitaanka Xilliga 2.
Scums Rabitaanka Xilliga 2
Waxa kale oo aad ka heli kartaa muuqaal YouTube ah oo faahfaahsan oo faahfaahinaya Spin off Manga. Fadlan daawo haddii aad xiisaynayso Xilliga 2 ee suurtogalka ah, iyo dabcan, wax badan oo ku saabsan Hanabi, Akane, Kanai iyo Mugi.
Doorka Akane iyo Kanai ee Kuzu No Honkai
Akane dabcan qayb wayn ayuu ka qaataa Naadi iyo xiriirkooda. Mr Kanai wuxuu kaloo door ka qaataa Naadi, laakiin ma jiro meel u dhow sida ugu badan Akane sameeyo. Xataa ma helno wada hadal badan isaga. Akane dhanka kale qayb wayn ayay ku lahayd sababtoo ah waxay adeegsatay saamaynteeda si ay wax uga qabato Mugi iyo waliba rag kale oo taxane ah.
Inta badan waxaan u maleynayaa in la'aanteed Akane, Hanabi iyo Mugi waa hubaal inay wada dhamayn lahaayeen. Sababo cad, tani waa suurtogal, tanina waxay la macno tahay Kanai, laga yaabee inay hadda uun la kulmi lahaayeen oo ay midba midka kale u bixi lahaayeen. Sidaa darteed, haddii Mugi iyo Xanabi waxa loo arkayey in ay yihiin lammaane ku habboon marka ay dhab ka dhigayaan, miyaanay taasi ka dhiganayn in ay dhab ahaan isula jeedaan haddii aanay sidaas ahayn?
Hadii Mr Kanai iyo Akane wax saameyn ah kuma yeelan haba yaraatee, ama ugu yaraan 90% ka yar saameyntii ay ku lahaayeen Anime Waxaan u maleynayaa in saameynta tani ay ku yeelan doonto labadaba Mugi iyo Hanabi waxay noqon doontaa mid aad u xiiso badan. Miyay wali isu iman doonaan oo ay noqon lahaayeen lamaanaha awooda ee loo arkayay inay ku jiraan Anime? Mise way is illowsiin lahaayeen oo waxay u sii wadi lahaayeen sidii aanay midda kale danaynayn?
Hanabi iyo Mugi Dhunkashada Kuzu No Honkai
Tani waa fikrad aad u xiiso badan in la eego. Tani waa run marka la eego sababta ka dambeysa sababta ay u wada joogaan. Xusuusnow, ma wada joogaan sababtoo ah way is jecel yihiin oo midba midka kale soo jiito. Sababtoo ah waxay rabaan inay iska dhigaan kan kale inuu yahay midka ay dhab ahaantii rabaan inay la joogaan. Haddaba, si ay u hubiyaan kuwa kale, way is caawin doonaan, isku nasteexayn doonaan, oo ay hubin doonaan in kan kale aanu ka fikirin midka ay jecel yihiin.
Ma samayn doonaan lamaane Anime ku habboon mustaqbalka?
Waa xidhiidh aad u qallafsan. Si kastaba ha ahaatee, sababtoo ah waxay isku daacad yihiin oo labaduba waxay rabaan wax isku mid ah, waxay leeyihiin wax badan oo ay wadaagaan. Farqiga kaliya ayaa noqon lahaa haddii Mugi or Hanabi ahaayeen jinsiga ka soo horjeeda. Sababta in Mugi iyo Hanabi si fiican loo wada shaqeeyay waa in labadooduba ay si qarsoodi ah isu yaqaaniin. Runtii waa waxa heshiiska lagu aasaasay.
Xanabi iyo Mugi oo wada jiifa
If Akane hadda si toos ah ayaa loo diiday Mugi oo u sheegay inuu kaligiis ka tago, markaas Mugi ku noqon lahaa beerta waqtigii loogu talagalay. Labaduba way dib isu soo laaban lahaayeen, waxayna u badan tahay inay sii wadaan xidhiidhkii ay bilaabeen. Si kastaba ha ahaatee, halkii hadda waxay noqon lahayd mid dhab ah, hadda waxay si dhab ah isu jeclaan karaan midba midka kale.
Aad bay uga caddahay dib u daawashada Kuzu No Honkai in arrintu sidaas tahay. Hanabi iyo Mugi Waxay noqon lahaayeen Lamaane Anime Ideal ah waxayna u badan tahay inay sii wataan xiriirkooda, oo ay ku wada koreen kulliyadda. Tani waa dhamaadka ay dad badani rabaan, si kastaba ha ahaatee, taageerayaal badan ayaa weli ku faraxsan dhammaadka.
Ilaa aan aragno Mugi iyo Xanabi
Dhamaanteen waan jecel nahay Mugi iyo Hanabi, dad badanina waxay rabeen inay mar kale wada arkaan. Waxaan rajeynayaa, the Spin Off manga waa la waafajin doonaa waxaana laga yaabaa inaan helno dhammaadka aan dhammaanteen dooneyno. Hadda waa inaan sugno. Waa ceeb taas Hanabi iyo Mugi soo maray oo aan waligood wada dhammaan. Waad ku mahadsan tahay akhrinta, nabad geli oo maalin wanaagsan.
Hoos waxaad iska qori kartaa diritaanka iimaylka si aadan waligaa moogaanin maqaal uu daabacay Cradle View.
Gelitaan Hore Waa ayo Komi Shoukou - Komi ma xidhiidhi karo
Gelitaanka Xiga Yumeko Jabami Muuqaalka Jilaaga